आज कति बढ्यो सुनको मूल्य ? – Investing Nepal
आज कति बढ्यो सुनको मूल्य ?
By: Nepse Direct Aug 06, 2019
सोमबार १५०० बढेर ६७ हजार ८०० पुगेको सुनको मूल्य मंगलबार सुनको मूल्य प्रति तोला २०० रुपैयाँ बढेर ६८ हजार पुगेको छ । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय दुबै कारणले सुनको मूल्य दिनानुदिन बढीरहेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य यस दिन ६७ हजार ७०० पुगेको छ । चाँदीको मूल्य भने सोमबारको जस्तै ७९५ रुपैयाँ नै रहेको छ ।
अमेरिकाले चीनियाँ सामन आयातमा बढाएको अतिरिक्त भन्सार दर र फेडरल रिजर्भ बैंकले ब्याजदर घटाएका कारण नेपालमा मात्र होइन अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै सुनको मूल्य आकासिएको हो । नेपालमा भने कस्मीरमा भइरहेको राजनीतिक समस्याले सुनको मूल्य थप बढाएको हो । कस्मीर विवादका कारण भारतिय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भएको छ । यसले सुनको भाउ अझ बढाएको छ ।
हरेक वर्ष साउनमा महिनामा नेपालमा सुनको भाउ बढ्ने गर्दछ । चाडपर्वका कारण यस सामयमा सुनको भाउ बढ्ने गरेको थियो । तर, यस वर्षभने आन्तरिक कारण भन्दा अन्तरराष्ट्रिय कारणले सुनको भाउ बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चाडपर्वका लागि सुन खरिद गर्नेहरु भाउ घट्ने पर्खाइमा छन् ।